Ciidamada oo gacanta ku dhigay gaarigii lagu qafaashay shaqaal... | Universal Somali TV
Wararka ka imaanaya Gobolka Shabellaha Dhexe ayaa sheegaya in Ciidamada Dowladda Somaliya ay Isniintii gacanta ku soo dhigeen gaarigii lagu qafaashay shaqaalihii caafimaad, ee maalintii Khamiista lagu laayay deegaanka Gololey ee duleedka Degmada Balcad.
Gaariga oo caasi ahaa ayaa waxaa xoog ku soo kaxeystay raggii dareyska Ciidamada Militariga ku labisnaa, ee shaqaalahaasi ka kaxeystay Xarunta MCH-ka ee Gololey, ka hor intii aysan dilin.
Nabadoon Maxamed Cali Madoobe oo ka mid ah Odayaasha Dhaqanka ee deegaanka Gololey ayaa xaqiijiyay in gaarigaasi iyo darawalkii wadayba gacanta lagu soo dhigay.
Nabadoonka ayaa xusay in gaariga uu yahay mid laga garanaayay deegaanka, iminka loo gudbiyay dhinaca Magaalada Muqdisho, iyadoona lagu wareejiyay Hay'adda Dembi Baarista ee CID.
Nabadoonka ayaa yiri "Hoomeydii askarta xoogtay, askartii dadka xasuuqday ay wadatay ayaa (shalay) la qabtay. waxaana lagu wareejiyay Hay'adda Dembi Baarista ee CID-da."
"Gaariga waxaa saarneyd shan nin oo ka degatay oo shaqaalaha indhaha ka xiray oo afduubatay. Xerada xageeda ayay gaariga u kaxeeyeen, anigana goobjoog maanan ahayn maalintaas, laakiin dadkii goobjoogga ahaa sidaas ayay noo sheegeen. Gaarigii ayayna suurtagashay in la soo qabto, darawalka gaariga ayaana warbixinta siin doono dowladda oo gaariga lala soo qabtay."
"Gaariga wuxuu ahaa gaari la yaqaanay oo jidka ay askarta ka afduubteen. Darawalkii ayaana la socday iyo shaqaalihii la soo afduubay, waxaana laga soo afduubay MCH-ka Gololey. Niman afka xiran oo tuuteysan ayaana afduubka gaystay."
Kan-xigaHay&#039;adda CID oo su&#039;aalo wey...
Kan-horeXukuumadda oo billowday fulinta amark...
53,969,735 unique visits